By vijayafm on	 April 23, 2019 विविध खबर, स्थानीय
गैडाकोट, १० वैशाख । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गत दुई दिने स्वास्थ शिविरको आयोजना गरेको छ । लमजुङको सुन्दरबजार अस्पतालमा संस्थाका सदस्य तथा गैर सदस्यहरुका लागि शिबिर सञ्चालन गरिरहेको छ । बुधबारसम्म सञ्चालन हुने शिविरमा पाठेघरको मुखमा लाग्ने क्यान्सरको परिक्षण समेत भईरहेको संस्थाका नायब कार्यकारी अधिकृत नारायण सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । शिविरको पहिलो दिन १२० जनाको स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुका साथै करिब २०० जनालाई महिलाहरुको पाठेघरको मुखमा लाग्ने क्यान्सर र स्तन क्यान्सरबारे चेतना अभिवृद्धि गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी संक्रमणको लक्षण देखिएका ५० जनालाई सुन्दरबजार अस्पतालले निशुल्क औषधी वितरण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङको समन्वय तथा बि.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, चितवनको प्राविधिक सहयोगमा शिविर सञ्चालन गरिएको हो ।
शिविरको उद्घाटन सत्रमा जिल्ला समन्वय समिती लमजुङका अध्यक्ष लोकराज पाण्डेको प्रमुख आतिथ्य एवं सुन्दरबजार नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानु शाहीको विशेष आतिथ्य रहेको थियो । उद्घाटन कार्यक्रम विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्तराज लम्सालको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा सुन्दरबजार नगरपालिकाका विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, सुन्दर बजार अस्पतालका प्रमुख डा. संगिता रानाभाट लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको ईजाजत प्राप्त वित्तिय संस्था विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । ग्रामिण क्षेत्रका गरिव तथा विपन्न वर्गका जनतालाई बैंकि∙ कारोवार गरी तिनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम गर्दै आएको छ । संस्थाको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत विजय लघुवित्तले महिलाहरुको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जनचेतनाको कार्यक्रम समेत गर्दै आएको छ ।